Ny fanampiana ny ekipa dia ny kolontsainay tsy miovaova, fizarana traikefa amin'ny indostria, ialao ireo hadisoana natao imbetsaka, mifanampy ny mpiasa, mivoaka na misy olona manana orinasa lehibe mila miatrika maika, ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia miara-miasa, mamaha ny olana. ampio ny mpanjifa hamita ilay asa maika.
Niorina tamin'ny 2011, ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana sy fivarotana vokatra vita amin'ny dantelina. Izy io dia manana studio famoronana manokana, efitrano santionany ary trano fitahirizam-bokatra vita. Isaky ny vanim-potoana fampiroboroboana ny vokatra, dia misy fomba lamba sy kojakoja vaovao omena. Manome marika ny akanjo anatiny sy avy any ivelany, fivarotana lehibe, tsenambarotra, marika elektronika sns ... Famokarana akanjo fanondranana any Etazonia, Eropa, Japon. Tamin'ny taona 2017, nanangana ny departemantan'ny varotra ivelany, nanokatra ny sehatra fivarotana an-tserasera vita sinoa, ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fampirantiana tany ivelany. Ireo firenena mpandray anjara dia misy an'i Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Turkey ary firenena hafa.
Ny kolontsain'ny orinasa dia miezaka ho any an-tampony, ny fanahin'ny ekipa mifanampy, mba hahafeno ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny vokatra vita amin'ny dantelina, hamoronana toe-javatra mandresy dia ny tanjontsika tsy miova.
Firaisankina, tsara, manavao, matihanina ary mahomby. Ny kalitaon'ny vokatra dia ny ain'ny orinasa. Ny serivisy tsara dia ny tetezana hifandraisantsika amin'ny mpanjifa. Ny hevitry ny mpanjifa rehetra no tohatra fandrosoantsika, ary ny fahatokisan'ny mpanjifa no hery manosika anay.
Fitantanana ny fahamendrehana
Ekipa mpamorona tena tsara
Voninahitry ny orinasa: aondrana any Azia atsimo atsinanana, eoropa ny vokatra, serivisy tsara ho an'ny mpanjifa vahiny midera. Ny vokatra dia amidy amin'ny orinasa mpivarotra akanjo an-trano, fahaizan'ny famolavolana tsara, hafainganana haingana, serivisy matihanina amin'ny varotra.
Ny kalitaon'ny vokatra dia ny ain'ny orinasa iray, ary ny fizahana ny vokatra dia mandeha mandritra ny dingana manontolo amin'ny famokarana. Hatramin'ny fanaraha-maso ny famokarana ny lamba embryon, amboradara, ary avy eo hatramin'ny loko vita vita tsy mitovy, amboradara tsy hita, fanaraha-maso, amboradara. Tanjonay ny hiantoka ny tahan'ny vokatra ambany sy avo lenta.
Ny logistika dia mahomby sy mora vidy, ny tanàna lehibe amin'ny fizarana harem-pirenena momba ny sidina, dia azo ianteherana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ny fepetra momba ny sidina ara-potoana ary ny safidy amin'ny làlana mety, amin'ny fandefasana fotoana. Ny Seranan-tsambo Ningbo no seranana faharoa lehibe indrindra any Shina, misy serivisy fandefasana entana mora sy haingana amin'ny ankamaroan'ny seranan-tsambo manerantany.